Booboow waa laguu dul-qaadanayaaye’e dadka ha caayin,qoraalkaagana khaladka ka buuxa eeg | Somaliland.Org
Booboow waa laguu dul-qaadanayaaye’e dadka ha caayin,qoraalkaagana khaladka ka buuxa eeg
November 9, 2012	Waxaan ka mid ahay dadweynaha sida tooska ah ugu xidhan ee la socda qormooyinka la magac-baxay “Magaabistaydii iyo Maagistaydii Lammaane Isku Lammaanaa” ee uu warbaahinta ku qoro Wasiirkii hore ee warfaafinta ee xilka laga 20/8/2012-kii Md. Boobe Yuusuf Ducaalle.
Boobe waxa uu ku sheegay qormooyinkiisa in uu rog-rogo oo uu dhinac walba ka saxo qoraalkiisa ka hor inta aanu warbaahinta ku faafin. Bal haddana qormadiisa 28-aad waxa uu ku sheegay in warqadii xilka lagaga qaaday ay ku jireen kalmado khaldan oo aan saxnayni. Waxa ka mid ahaa ereyadda uu ku duray Madaxtooyada in ay lagu yidhi xilka u wareeji si niyad-sami ah “waxa uu xukuumadda ku eedeeyay kalmadda Niyadsami ayay kala go’ayn waayeen. Taasi oo aan ahayn khalad aan xukuumadda lagu cambaareyn Karin.
Boobe waxaan leeyahay waxaase ma aha wax aad dawladda ku cambaareyn karto ee sheeko kale keen. Qormadii 28-aad ee Boobe waxa ku jiray inuu khalday taariikho uu ka waramayay. Tusaale ahaan waxa uu sheegay in Madaxtooyaddu soo jeeday 31-kii Ogos illaa 1-dii Ogos, waxaanu u jeeday 1-dii September. Khaladkana mid ka weyni ma jiro haddii uu khalad tilmaamayo. Waxaan leeyahay Boobe waxa uu ka dhigan yahay “Maroodigu taharta korkiisa saaran ka arkee ta ka kale saaran ayuu arkaa.”
Sidaasi darteed waxaan leeyahay fadlan iska sax qoraalka oo adiga oo cid doonaya inaad waxaan jirin ku bah-disho adigu ha is bahdilin.
Cismaan Cabdi Muuse
Previous PostGuddoomiyaha Komishanka Togdheer Oo Beeniyay In Goobo cod-bixineed la laalayNext PostC/Kariim Xinif oo Daboolka Ka qaaday inaanu cidna u dabo-fadhiisanayn inuu u ololeeyo KULMIYE	Blog